FAMINGAVINGANA OLONA : Lietnàn’ny Zandary nifona teny imasom-bahoaka
Lietnà zandary iray antsoina hoe Andrianjafy izay miasa any Antananarivo no mamo nanao hetraketraka teny amoron-dranomasina Toamasina, ny alin’ny sabotsy lasa teo. 19 décembre 2016
Tamin’ny 11 ora alina, sendra nandalo mijery ny zava-misy eto Toamasina amin’ny alina ny ben’ny tanàna Elysé Ratsiraka dia nibahan-dalana teny moron-dranomasina ny fiaran’ilay zandary.
Vokany, nangata-dalana moramora ny ben’ny tanàna saingy tsy niala mihitsy ilay Zandary. Tsy vitan’ny tsy niala fa sady namingavinga.
Raikitra noho izany ny fifamaliana teo aminy sy ny ben’ny tanàna Elysé Ratsiraka. Voatery niantso ny Jeneraly Paza Didier ingahy Elysé Ratsiraka. Nanome baiko i Jeneraly Paza ny amin’ny handraisan’ny teo anivon’ny « Groupement de la Gendarmerie » andraikitra.
Tonga teny amin’ny biraon’ny « Groupement de la Gendarmerie Atsinanana » ny fifamaliana teo amin’ny ben’ny tanànan’i Toamasina sy ilay Lietnà. Nanaiky nifona ihany anefa ilay Lietnà saingy nametraka fepetra i Elysé Ratsiraka dia ny anaovana ilay fifonana eny amoron-dranomaisina toerana nisehoan’ny famingavingana.
Nanaiky ilay Lietnà ka nifona teo imasom-bahoaka teny amoron-dranomasina.